ZVikonzero zvekurega - 802Quits
musha » Vermonters » ZVikonzero zvekurega
ZVikonzero zvekurega zvakanaka
Ndechipi chikonzero chakanakisa chekurega kuputa, kufema kana kushandisa zvimwe zvigadzirwa zvefodya? Kune zvikonzero zvakawanda zvekusiya. Dzese dzakanaka. Uye hausi wega.
Vakazvitakura kana amai vatsva?
Wana rubatsiro rwemahara rwekusiya fodya uye imwe fodya iwe nemwana wako.
Kuvandudza Utano Hwako
Kune zvikonzero zvakawanda zvekurega kuputa kana kushandisa zvimwe zvigadzirwa zvefodya. Kwete chete kurega fodya, e-midzanga kana imwe fodya kunatsiridza hutano hwako, zvinogona kukubatsira kuti unzwe zvirinani uye nekukupa iwe simba rekuita mune dzimwe tsika dzakanaka seyokurovedza muviri.
Kunyange vanhu vazhinji vachinetsekana nezvekuwana huremu mushure mekusiya, zvakakosha kuti ugare uchifunga zvese zvakanakira kurega kusvuta kana imwe fodya uye kuti uri kuitirei hutano hwako nekusiya. Nekuti kusvuta zvinokanganisa muviri wese, muviri wako wese unobatsira.
Kana iwe uine hanya nezvekuwana huremu, kana uchida kudzidza nezve izvo zvekudya kumisa zvishuwo zvako, heano mamwe matipi anogona kukubatsira iwe kudzivirira huremu nekuvandudza hutano hwako!
KUDYA MUVIRI WAKO NEZVO ZVAKANAKA
Rangarira kuti izvi hazvisi zvekuzvinyima iwe chimwe chinhu — ndezvekupa muviri wako izvo zvaunoda kuti uve panguva kwayo. Kudya kune hutano hakugone kubatsira chete kudzivirira kuwedzera uremu, kunogona kunakidza! 1 2
Idya michero nemiriwo yakawanda.
Ronga chikafu chako uye chikafu chinonaka kuitira kuti usamboziya nenzara. (Zviri nyore kwazvo kutora zvekudya zvisina hutano kana uine nzara.)
Uya nerwendo rwezvikafu zvekudya zvine hutano zvaunofarira (semuenzaniso, mbeu yezuva, chibereko, popcorn isina kuputirwa, wholegrain crackers ine chizi, celery inonamira nepeanut butter).
Inwa mvura yakawanda uye gumisa zvinwiwa nemakoriori senge doro, mashuga mashuga uye masoda.
Tarisa zvikamu zvako zvehukuru. Iyo Hutano Kudya Plate2 pazasi inogona kukubatsira kuronga yako chikamu chemazana.
Vavarira kuva nehafu yendiro yako yemanheru kuva michero kana miriwo, 1/4 yeplate ive yakaonda mapuroteni (semuenzaniso, huku, hove dzakabikwa, chili) uye 1/4 yeplate ive carb ine hutano senge mbatatisi kana mupunga wakasviba.
Kana uine "zino rinotapira", ganhurira dhizeti kamwe chete pazuva uye gumira saizi yedhizeti (semuenzaniso, hafu kapu yeice cream, hafu kapu yenzungu yakasanganiswa nemichero yakaomeswa & yakasviba chokoreti machipisi, 6 oz. chimedu chemuchero mutsva, 1 mativi echokoreti rakasviba). Tsvaga internet "mazano ane dhizeti ane hutano."
RIPA MUVIRI WAKO NEMAFUNGIRO MAZUVA OSE
Chiitwa chemuviri, sekufamba, kurima gadheni / basa repamba, kuchovha bhasikoro, kutamba, kusimudza masimbi, kufoshora, kuyambuka nyika, kutsvedza nechando, zvinokubatsira munzira dzakawanda1:
Inobatsira kunatsiridza manzwiro ako
Inobatsira kukudzivirira kubva pakuwedzera uremu
Inochengetedza huwandu hweshuga pasi kudzivirira chirwere cheshuga (kana chengeta chirwere cheshuga chiri pasi pesimba)
Inoita muviri kusimba
Inochengetedza mapfupa ako uye majoini aine hutano
Seta chinangwa chekuwedzera mashanu maminetsi ekurovedza muviri kune izvo zvaunotoita zuva rega rega kusvika iwe wasvika paawa pazuva. Rangarira, chiitiko chemuviri chinogona kuve chero chinhu chinoita kuti iwe ufambe zvakakwana kuti usimire ziya.
Sarudza MAITIRO ASI PASI PEDYO KUKUBATSIRA KUTI URWESE ZVINODA
Tsika yekushandisa mukanwa kushandisa fodya - kunyanya kuputa - inogona kunge yakaoma kuisiya sefodya pachayo. Iko kuyedza kutsiva iyo mudzanga, e-mudzanga kana kupepeta peni nechikafu kugutsa iwo ruoko-kumuromo muromo. Vamwe vanhu vanoshandisa fodya vanoona zvichibatsira kutsenga mashanga kana chingamu isina shuga, kana kuita chimwe chinhu chitsva kutora maoko avo.
Usarega kunetseka kwekuwana mashoma emapaundi kuchikuodza moyo kuti urege. Nekurega iwe hausi kungotora matanho ekuwedzera makore kuhupenyu hwako, iwe unonatsiridza hunhu hwako hwehupenyu uye kuchengetedza vanhu vakakukomberedza vakachengeteka kubva kuhutsi hwefodya. Usanonoka kutaura nemupi wako wezvehutano kana iwe uchinetseka nezvekuwedzera uremu.
Heano zvimwe zvekuwedzera zviwanikwa pakurasikirwa nehuremu kana kuchengetedza huremu hune hutano:
CDC: Hutano Hwehutano
CDC: Kudya zvine hutano kwehuremu hune hutano
Utsi hwefodya hauna hutano kumunhu wese wemumba mako. Asi zvinonyanya kukuvadza kuvana vane mapapu achiri kukura uye kuvanhu vane asthma, gomarara, COPD uye chirwere chemwoyo. Ichokwadi, kusvuta uye kusvuta kune utsi hwechipiri ndeimwe yezvinyanya kuzivikanwa uye zvakakomba zvinokonzera mweya.
Chiremba Mukuru weU.S. anoti chiripo kwete Chikamu chisina njodzi chekuratidzira hutsi hwefodya. Kune chero munhu, kuve padhuze nechero fodya kwakafanana nekuti vari kuputa, futi. Kunyangwe kuratidzwa kupfupi kune hutsi hwefodya kune zvinokuvadza zvinokurumidza, sekuwedzera njodzi yechirwere chemwoyo, sitiroko, chirwere cheshuga uye kenza yemapapu.
ONA ZVESE NZIRA DZESVONDE Utsi HWAKASHATA KWAKO UYE NEVANODIWA VAKO
Vana nevacheche vane mapapu madiki ayo achiri kukura. Vane njodzi yakatokura kubva kune chepfu yeutsi hwefodya.
Kana vana vachifema muutsi, zvinogona kukonzera matambudziko ehutano anogara navo hupenyu hwavo hwese. Izvi zvinosanganisira matambudziko akaita seasima, bronchitis, mabayo, kutapurika nzeve noutachiona.
Kune vanhu vakuru vanotambura neasthma, allergies kana bronchitis, utsi hwefodya hunowedzera zviratidzo.
Vacheche vane vabereki kana vachengeti vanosvuta vane mukana wakapetwa kaviri wekufa kubva kuSecond Infant Death Syndrome (SIDS).
Zvipfuwo zvinofema hutsi hwefodya hwechipiri zvine kusagadzikana, kenza nemapapu matambudziko kupfuura mhuka dzinovaraidza dzinogara mudzimba dzisina utsi.
Hutano Mhedzisiro Yekusazvipira Kuratidzira kune Fodya Utsi: Chirevo cheChiremba Mukuru
Mhuri yako inogona kukurudzira zvikuru kukubatsira kurega kusvuta fodya, e-fodya kana zvimwe zvigadzirwa zvefodya. Regai ivo vakukurudzire uye vakutsigire iwe mukurega kwako kuedza.
Ini handidi kuti vanasikana vangu vatatu, murume kana vazukuru vaviri vafambe kuburikidza nekundiona ndichifa nechirwere chinotyisa, nenzira inotyisa! Mazuva makumi matatu ndisina mudzanga uye mamwe mazuva mazhinji ekurarama pamberi! Handikwanise kufara. 🙂
Kuonekwa uine chirwere kunogona kuve kunotyisa kumutsa-kukukurudzira iwe kutora matanho ekutanga kuchirongwa chekurega kuputa kana imwe fodya. Kunyangwe kurega kunogona kuvandudza chirwere chako kana kukubatsira zvirinani kugadzirisa zviratidzo zvako, izvo zvinobatsira zvehutano zvinogona kusvika kure.
Pandakasiya makore 17 apfuura, yanga isiri nguva yekutanga kuti ndiedze kurega, asi yaive nguva yekupedzisira uye yekupedzisira. Ndichingowanikwa ndine chisingaperi bronchitis uye yekutanga danho emphysema, ndakaziva kuti ndiyo yambiro yangu yekupedzisira. Ndakaona rombo rakanaka randakaita kuti ndanga ndisiri kuudzwa kuti ndaive nekenza yemapapu.
Dzivirira Hutano hweVacheche
Kana iwe kana mumwe wako uine nhumbu kana uchifunga nezve nhumbu, ino inguva huru yekurega kuputa. Kurega kusvuta usati, panguva kana mushure mekuzvitakura ndiyo yakanyanya kunaka chipo chaunogona kuzvipa iwe nemwana wako.
Inoderedza mukana wako wekutora nhumbu
Inopa mwana wako oxygen yakawanda, kunyangwe mushure mezuva rimwe chete rekusasvuta
Inogadzira njodzi shoma yekuti mwana wako anozozvarwa nekukurumidza
Inovandudza mukana wekuti mwana wako auye kumba kubva kuchipatara newe
Inoderedza matambudziko ekufema, kufema uye kurwara muvacheche
Kunoderedza njodzi yeChingoerekana Mucheche WeRufu Syndrome (SIDS), hutachiona nzeve, asthma, bronchitis uye pneumonia.
Hutano hwako hunokosha kumwana wako, futi.
Mukaka wako wepamuviri uchave uine hutano
Hembe dzako, bvudzi uye imba zvinonhuwa zviri nani
Chikafu chako chinozonaka
Uchave nemari yakawanda yaunogona kushandisa pane zvimwe zvinhu
Iwe unenge usingaite mukana wekukura chirwere chemoyo, sitiroko, kenza yemapapu, chirwere chisingaperi chemapapu uye zvimwe zvirwere zvine chekuita neutsi
Wana REMAHARA rakagadzirirwa rubatsiro kurega kusvuta kana imwe fodya uye uwane kadhi rechipo mibairo! Fona 1-800-QUIT-IZVO kushanda pamwe nehunyanzvi hwakadzidziswa Pregnancy Kurega Kochi uye iwe unogona kuwana $ 20 kana $ 30 kadhi rechipo kune yega yega yekupedzesera kufona (kusvika $ 250) panguva uye mushure mekubata kwako. Dzidza zvimwe uye tanga kuwana mibairo.
Kufirwa nemunhu waunoda chinhu chakakosha chekusiya fodya. Vamwe vakakomberedza Vermont vakasiya kukudza hupenyu hwemudiwa.
Baba vangu vakafa nenyaya dzese dzehutano dzakanangana nekusvuta. Amai vangu vachiri vapenyu, asi vakavhiyiwa moyo wakavhurika nekuda kwekusvuta kwavo. Nehurombo, ini zvakare ndine zvimwe zvine chekuita nezvehutano zvine chekuita nekusvuta: osteoporosis, polyps pane angu ezwi chords uye COPD. Iri ndiro zuva rangu rekutanga, uye ndinonzwa kunyatsonaka uye kusimba. Ndinoziva kuti ndinogona kuita izvi. Ndinoziva ndakakodzera kuzviita.
Paunorega kuputa, kufema kana zvimwe zvigadzirwa zvefodya, haisi yako chete hutano hwauri kuponesa. Iwe unozoshamisika kuona zvaunokwanisa kuita kana usiri kushandisa mari pamidzanga kana e-fodya, kutsenga fodya, fodya kana kupepesa zvinhu.
Ndaiwanza kusvuta pakiti pazuva, izvo zvaive zvichidhura zvakanyanya. Saka pandakasiya, ndakatanga kuisa $ 5 pazuva muhari mukicheni mangu. Ndanga ndasiiwa kwemwedzi misere ikozvino, saka ndine yakanaka yakanaka chunk yeshanduko yakachengetedzwa kumusoro. Kana ndikakwanisa kusvika pagore rekurega, ndiri kutora mwanasikana wangu pazororo nemari.
Wagadzirira kutora nhanho yekutanga?
Gadzira yakasarudzika kurega chirongwa ne802Quits nhasi!